Raha nahatratra 73 % teo aloha dia nihena ho 67,55 % tamin’ity taona ity izay nambaran-dRamananantony Lalaina, lehiben’ny fari-piadidiam-pampianaran’Antananarivo Renivohitra fa tsy mbola fantatra hatreto ny antony. Nanomboka nanadihady ny mety ho nahatonga izany izy ireo omaly hahafahana mijery ny lesoka, hanarenana ny ho avy. Raha tsiahivina, ny taranja lazaolana sy ny frantsay no tena nampitarainana fatratra ireo kilonga madinika niatrika iny fanadinana CEPE ity. Na izany aza anefa dia efa nidina teo amin’ny 09 /20 na 09, 50/20 ny naoty nanafahana azy ireo, araka ny lalàna saingy mbola izay ihany no vokatra azo. Mikasika ny fanadinana BEPC izay hotanterahina manomboka amin’ny alatsinainy 09 septambra ho avy izao moa dia fantatra fa anio talata no haka ny laza adina any amin’ny Cnapmad ireo tompon’andraikitra ary hanatitra izany isaky ny Boriborintany mba ambenan’ny mpitandro ny filaminana. Andro maromaro aorian’izay vao alain’ny lehiben’ny foibem-panadinana izany ka tsy hisy hivoaka raha tsy mandritra ny androm-panadinana.